Mukuru wekumahofisi eConfederation of African Football vachiona nezvevabati vepembe, VaIsmael Ahmed, vanoti VaBamala havana chavakakanganisa apo vakaramba chibodzwa cheCaps United icho chakakandwa naDominic Chungwa.
VaAhmed vanoti vari kutarisira VaBamala kuve mumwe wevabati vepembe pama 2019 Africa Cup of Nations kana Zimbabwe Football Association ikatumira zita ravo sevamwe vavanoda kuti vazobata pembe pamakundano aya.
Asi mumwe muteveri weCaps United, VaTichafa Musabayana, vanoti iyi yave imwe nyaya vachiti ivo chikwata chavo chakabirirwa nekurambirwa chibodzwa chaChungwa ichi.
Mumwe muteveri wemaGreen Machine, VaCharles Daka, vanobvumirana naVaMusabayana.
Muteveri weHighlanders, VaStanlark Masundire, vanobvuma kuti chikwata chavo chaifanira kuve chakarohwa mumutambo uyu vachiti ivo semaonero avo, chibodzwa cheCaps United ichi chaifanira kuve chisina kurambwa.
Mutambo we Caps United neHighlanders uyo wakapera uri mangange mushure mekurambwa kwechibodzwa chaChungwa ichi ndiyo nyaya iri kungotaurwa nezvayo munhabvu munyika kunyange hazvo Dynamos yakarohwa 2-1 pamusha neHwange.
Pari zvino, chikwata cheChicken Inn ndicho chiri kutungamira makundano aya nemapoinzi matanhatu kubva mumitambo miviri yakaenzana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu.
Svondo rino, maGame Corks ari pamusha muBarbourfields Stadium neDynamos.